SHEEKO CAJIIB AH :-Abidkey tanoo kale -Sheeko Ukun iyo Canjeero W/Q Abuukar Al-badri
SHEEKO CAJIIB AH :-Abidkey tanoo kale -Sheeko Ukun iyo Canjeero W/Q Abuukar Al-badri - XOG MUHIIM AH | WARAR SUGAN |
Wiil yar ayaa guri dhexdiisa ka heesaya oo leh“Booloboolo biibtoy, afka biyo ku qaadoy, hooyadey u diidoy, aabeheed u diidoy, dhulka biliq ku siisooy”aniga xitaa waan ka helay heestaas iyo luuqda uu ku qaadayey canuga 3 jirka ah ee soo aroor kacay.
Safka quruxda badan ee ay boolaboolooyinka ku duulayaan iyo muuqaalka cirka ee casaanka ah oo isku dheehmay ayaa waxay kordhiyeen bilicda jawiga, indhuhuna dhankii ay eegaanba kuma daalayaan oo durba way jecleysanayaan walow quruxda muqaneysa uu yara dilayo geedka“Easy Grower”ee ay Soomaalidu u taqaano Cali-Garoobka oo wadada hareeraheeda buux dhaafiyey.
Dhammaan wax yaabahan aan sheegaya ma aha kuwo cusub oo lala yaabo, waa wax subax waliba la arko oo caadi ah ama nolosha caadiga ah ka mid ah. Balse mid baa yaab badan laheyd oo iga keentay oraahda ah“Abidkey tanoo kale!!!!”
“War maxaa na loo soo daadiyey?”ayaa akteyda ka yeertay. Dhankii hadalka uu ka yeeray ayaan soo eegay qof iima muuqdo.
“Ma ogi, malaha waa na laga dhergay”ayaa haddana isla dhankii ka yeertay.
Shaki badan baa i galay, malaha jin baan sheekeysanaya ayaan is dhahay, waana acuudu bileystay. Geesahayga ayaan si fiican u eeg eegay, waxna waan u jeedi waayey, kaddib inaan dhaqaaqo ayaan damcay, balse cod u eg midka shimbirka “Baqbagaa”ee dadka ka bada hadaaqa ayaa meel godka qashinka dhexdiisa ah ka shanqaray.
“Canjeero in lagu soo daadiyo waad astaahishaa, habeenkii oo dhan ayaad hurdo beel nagu riday, guri walba adigaa sidii qori ka dig iyo dam leh fiidkii, dhoocil walba adigey ku garaaceysaa, balaayo qalfoof ehe”ayey Ukun ku canaanatay Canjeero.
Canjeero oo dulqaad muujineysa ayaa tiri“Aniga qofna igama maarmo layman xushmeeyo oo markii layga dhergo waa la isoo daadiyaa sidan oo kale, Ilaah ayaa jooga”
Weliba farsamo dhowaan soo baxday ayaan kuu qishayaaye, gabdhaha jirkoodu ad adag yahay marka ay doonayaan in ay jirkooda ka dhigaan mid“Soft”ah, waxay isku qasaan Qasil iyo ukun, way is mariyaan, kaddibna waxay sugaan inta uu jirka kaga engegaan, markaas ayey ka qubeystaan, gabadha saas sameysa jirkeeda wuxuu noqdaa mid il iyo gacanba soo jiita.
Canjeero oo dhakafaarsan ayaa ukun waydiisay,“Haddiiba aad meel kasta ku wanaagsan tahay maxaa anigana la iigu kaa dari waayey si aan u jilco doolsho ahaan?”
Ukun waxay sii wadatay hadalkeedii oo waxay tiri:Bur saliid iyo bur ceesh ayaan ku jiraa, baasta al foorno xitaa mar mar waa laygu daraa ayey hadalkeedii ku soo koobtay.
In aan kaa caansanahay waxaa daliil u ah, marka ilmaha yar yar uu“apetite-ka”ka xirmo hooyadood waxay dhahdaa wiilkayga xitaa hal canjeero ma dhameyn karo, wuu iga xanuunsan yahay ayay ku calaacalaan, anigaa cunto qaadashada dadka xitaa hal-beeg u ah ayey hadalkeeda ku dartay canjeero.
Canjeero waxay sheegtay inay neceb tahay wiilasha dalac bilaash gabdhaha ku ciriiriya ee dhahaaya“Dalac bilaashka ayaanba ka helaa”.
Canjeero waxay ka sheekeysay marka ay ugu macaan tahay in la cuno.“Sida ugu macaan ee canjeero loo cuno ayaan kuu sheegayaa”Ayey tiri Canjeero.
Ukun oo dhoolacadeyneysa ayaa hadalkii ku soo laabatay. Waxayna canjeero ugu faantay“Aniga layma boobo, qof i muutmuutsanaayo mooyee qof i calaanjinaayo xitaa ma leh. Haaneedka ay dadka ii cunaan darteed mar mar anigaa dhanxanagooda iyo carabkooda dhexdooda ku raaxeysta.
Ukun ayaa hadalkii ku hor martay ee tiri“Aan mudaaharaadno”Canjeero waxay ku jawaabtay“Oo maxaan sameynaa?”Ukun ayaa haddana soo jawaabtay oo tirir“Adiga marka ay gabdhaha doonayaan inay ku qasaan fiidkii gacanta kaga dheg hana ka fuqin”.“Oo haddii aan gacmaha kaga dhego way iska key dhaqaayaane ma iyadaa dhib leh”ayey canjeero waydiisay ukun, “Ha ku dhaqaane adiga isku day inaadan ka fuqin, marka lagu waydiiyo sababtana ku dheh mar dambe ha I tuurin”
Canjeero ayaa ukun waydiisay“Adigana maxaad sameyneysaa?”
“Aniga huruuda ukunta ku dhex jirta ayaan dhammaan ukumaha ka qarinaayaa si fuunto loogu maleeyo, illaa layga garbaxana kuma soo celinaayo”ayey tiri.
Canjeero waxay ku jawaabtay,“Shan-faroodle” “marka uu ku waayana wuu oynaayaa, markii uu ALLAAH xoogaa siiyana wuu kibraayaa oo qashinka ayuu kugu shubaayaa”
Riyadii yaabka badneydna halkaas ayey ku dhammaatay. Aniga oo yaaban ayaan inta aan sariirta si hal haleel ah uga kacay waxaan iri “Abidkey tanoo kale!!
SHIRQOOLKII LAGU DILAY MU’AMMAR QADAAFI IYO BEENTII LOOGU MARMARSIIYOODAY WEERARKII LAGU QAADAY DALKA LIIBYA.
Akhriso War-Saxafadeed laga soo saaray Wadahadalada Nabadeed ee ka socda Gaalgacyo